Alexis Sanchez oo sheegay Sababtii uu ugu biirey Manchester United | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Alexis Sanchez oo sheegay Sababtii uu ugu biirey Manchester United
Xidiidga Cusub ee kooxda Mancehster United Alexis Sanchez ayaa markii u horeysey ka hadlay Sababtii uu ugu biirey Naadigiisa Cusub ugana tegay Arsenal oo uu Sanado badan ka mid ahaa.
Alexis Sanchez ayaa sheegay in Sababta ugu weyn ee uu u doortay Manchester United in ay tahay in uu doonayo in uu kooxdaas kula Guuleysto koobab waa weyn isla Markaana uu sameeyo Magac ka weyn midka uu hada leeyahay.
Cayaaryaahnka dalka Chile oo Waraysi siiyey Sky Sports’ ayaa yiri Manchester United waa naadiga ugu weyn England Xiddig kasta oo kubada Cagta Cayaara waxa uu ku hamiyaa in uu Maalin un u dheelo waxaanan doonayaa in aan halkaan ka sameeyo taariikh kuna Guuleysto wax kasta.
Thierry Henry, oo ahaa shaqsigii Waraysiga ka qaaday Sanchez ayaa weydiiyey Cayaaryahanka hadii ka shalaynaayo xiligii uu kusugnaa Garoonka Arsenal balse waxa uu ku jawaabay Maya kama shalaynaayo Arsenal waa koox weyn in kasta oo aan ka helin wixii aan ku haminayey oo ah in aan laqaado koobab waa weyn.
Henry ayaa sidoo kale weydiiyey Cayaaryahanka dalka Chile Sababtii uu ugu biiri Waayey Manchester City oo qarka u saaran in ay qaado Horyaalka Premier League ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan doonayey in aan lashaqeeyo Jose Mourinho oo ah Macalinka Caalamka ugu fiican waxaanan rajeynayaa in xili aan dheereyn Manchester United ay ku Guuleysan doonto Premier League iyo koobab kale oo muhiim ah.